Fitaovana fampitaovana angovo herinaratra ary fitaovana | China Power injeniera fampitaovana sy fitaovana mpanamboatra, mpamatsy
Ny tariby herinaratra XLPE voahidy dia mety amin'ny fametrahana raikitra amin'ny tsipika fandefasana herinaratra sy fizarana miaraka amin'ny AC 50HZ sy ny valiny 0.6 / 1kV~35kV
Naoty voasokajy: 0.6 / 1kV ~ 35kV
Fitaovana mpitantana: varahina na aluminium.
Qty ny cores: core tokana, cores roa, cores telo, cores efatra (3 + 1 cores), cores dimy (3 + 2 cores).
Karazana tariby: tariby tsy miady, fefy vy mifono vy ary tariby vy mifono vy
ambany na antonony malefaka overhead aerial bundled conductor aluminium ABC tariby overhead tariby
Aerial Bundle Conductor (tariby ABC) dia foto-kevitra tena vaovao momba ny fitsinjaram-pahefana mihoapampana raha oharina amin'ny rafitra fizarazarana overhead conductor overhead mahazatra. Izy io dia manome fiarovana avo lenta sy azo antoka kokoa, fatiantoka herinaratra ambany ary toekarena farany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fametrahana, ny fikojakojana ary ny vidin'ny asa. Ity rafitra ity dia mety amin'ny fizarana ambanivohitra ary tonga lafatra indrindra amin'ny fametrahana ireo faritra sarotra toa ny faritra be havoana, faritra ala, faritra amoron-tsiraka sns.
Ny tariby herinaratra PVC (tariby herinaratra plastika) dia iray amin'ny vokatra avo lenta amin'ny orinasanay. Ny vokatra dia tsy hoe manana fahaiza-manao herinaratra tsara fotsiny, fa manana fanamafisana simika tsara ihany koa, rafitra tsotra, mora ampiasaina ary ny fametrahana tariby dia tsy ferana amin'ny fahalavoana. Ampiasaina be izy io ao amin'ny circuit transformer izay manome naoty 6000V na ambany.
1. Generator napetraka fampiasana vy avo lenta dia canopy matevina - 2MM ka hatramin'ny 6MM.
2. Fitaovana mitroka feo avo lenta - insulateur, fireproofing.
3. Generator misy batterie 12V / 24V DC miaraka amin'ny charger, ny batterie dia mampifandray tariby.
4. Generator misy boaty solika 10-12 ora miaraka amin'ny tondro solika, fotoana lava iasana.
Ny andiana kabinetra fizarana herinaratra dia mety amin'ny AC 50 Hz, ny lanjan'ny herinaratra hatramin'ny 0,4 KV sy ny rafitra fizarana herinaratra. Ity andiam-vokatra ity dia fitambarana tamby fanonerana mandeha ho azy sy fizarana herinaratra. Ary izy io dia kabary fizarana tsindry anaty trano sy any ivelany izay miaro ny fivoahan'ny rano, ny fandrefesana ny angovo, ny fiarovana amin'izao fotoana izao, ny fisokafana mihoa-pefy. Izy io dia manana tombony amin'ny habetsahan'ny boky kely, fametrahana mora, mora vidy, fisorohana halatra herinaratra, fanamafisana matanjaka, fanoherana ny fahanterana, rotor marina, tsy misy lesoka fanonerana, sns. Noho izany dia vokatra tsara sy tiana indrindra ho an'ny fanavaozana ny tariby elektrika izany.